नेइमार विरुद्ध आफ्नै क्लब पिएसजीका समर्थक उत्रिए मैदानमा, ‘गो अवे–गेट लस्ट’ भन्दै धपाए मैदानबाट ! « Etajakhabar
नेइमार विरुद्ध आफ्नै क्लब पिएसजीका समर्थक उत्रिए मैदानमा, ‘गो अवे–गेट लस्ट’ भन्दै धपाए मैदानबाट !
प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७६, सोमबार ०९:०२
स्टार ब्राजिली फरवार्ड नेयमारविनै पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले फ्रेन्च लिग वानमा सानदार जित निकालेको छ ।साविकको विजेतासमेत रहेको पीएसजीले फ्रेन्च लिग वानको पहिलो खेलमा निम्सलाई ३–० ले पराजित गरेको हो । घरेलु मैदानमा आइतबार राति भएको खेलमा पीएसजीलाई जिताउन एडिन्सन काभनी, केलियन एमबाप्पे र एन्जल डि मारियाले गोल गरे ।
खेलको २४औ मिनेटमा काभनीको पेनाल्टी गोलबाट पीएसजीले पहिलो हाफमा १–० को अग्रता लिएको थियो । पाब्लो सारावियाको कर्नरमा पाब्लो मार्टिनेजले पेनाल्टी एरियामा ह्यान्ड गरेपछि रेफ्रीले भिएआरको सहायतामा पीएसजीलाई पेनाल्टी प्रदान गरेको थियो । जसमा उरुग्वेवियन फरवार्ड काभनी चुकेनन् ।५६औं मिनेटमा जुआज बर्नाटको पासमा केलियन एमबाप्पेले गोल गर्दै पीएसजीको अग्रता दोब्बर बनाए । ६९औं मिनेटमा एन्जल डि मारियाले एमबाप्पेको पासमा गोल गर्दै पीएसजीलाई ३–० को सानदार जित दिलाए ।यो खेलमा पीएसजीका निर्देशक लियोनार्डाेले नेयमारलाई नखेलाउने निर्णय गरेका थिए । नेयमार गतसाता फ्रेन्च सुपरकप दौरान पनि बेन्चमै रहेका थिए ।
पछिल्लो समय क्लबसँग असन्तुष्ट रहेको नेयमार उचित प्रस्ताव आएको खण्डमा क्लब छाड्ने मनस्थितिमा छन् । उनलाई बार्सिलोना र रियाल म्याड्रिडले चासो देखाइरहेको छन् ।यसैबीचमा खेल चलिरहँदा विश्व कीर्तिमानी मूल्यमा दुई वर्षअघि आफूलाई भव्यताका साथ भित्र्याएको क्लब कुनै पनि हालतमा छोड्न चाहेका नेइमारविरुद्ध पिएसजीका समर्थकले नाराबाजी गरेका छन् । फ्रेन्च लिग वान फुटबलको नयाँ सिजन अन्तर्गत पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पिएसजी) को आइतबार राति भएको निमेससँगको पहिलो खेलको क्रममा घरेलु मैदानमा जम्मा भएका पिएसजी समर्थकले नेइमारविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।उनीहरुले ‘नेइमार गो अवे’ लेखिएका ब्यानर तथा पोस्टर प्रदर्शन गरेका छन् । पिएसजीका समर्थकहरुले नेइमारलाई क्रस लगाएको पोस्टर पनि प्रदर्शन गरे ।
नेइमारले क्लब छोड्ने सम्भावनाका बिच उनी बिना नै मैदानमा रहेको पिएसजीले निमेसमाथि ३–० को जित दर्ता गरेको छ । उसका लागि एडिन्सन काभानी, केलियन एमबाप्पे र एन्जल डी मारियाले गोल गरे । क्लबका तीन स्टार खेलाडीले गोल गर्दा मैदान बाहिर रहेका नेइमारविरुद्ध नाराबाजी भएको हो । केही समर्थकले ‘गेट लस्ट’ लेखिएको ब्यानर पनि बोकेका थिए ।खेलअघि पिएसजीका स्पोर्टिङ्ग डाइरेक्टर लियोनार्डोले नेइमारको बहिर्गमन सम्बन्धी वार्ता पहिले भन्दा सघन भएको बताएका छन् । तर प्रशिक्षक थोसम टुसिलले भने फ्रेन्च टेलिभिजन कार्यक्रममा नेइमार आफूहरुसँगै रहेको र उनी आफूहरुका लागि निकै महत्वपूर्ण खेलाडी रहेको बताएका थिए । उनलाई गुमाउएर उनकै स्तरको अर्को खेलाडी पाउन निकै कठिन रहेको उनको भनाई थियो ।
तर खेलको क्रममा समर्थकले गरेको नेइमारविरुद्धको नाराबाजीपछि प्रशिक्षक टुसिलले आफ्नो सहानुभूति समर्थकसँग रहेको बताएका छन् ।विश्वका सबैभन्दा महंगा फुटबल खेलाडी नेइमार आफ्नो पुरानो क्लब बार्सिलोना फर्किन चाहन्छन्।तर बार्सिलोनाले एन्टोनी ग्रिजम्यानसहितको स्टार खेलाडी अनुबन्धित गरेकाले उनको सम्भावना कम भएको बताइन्छ । यस्तै नेइमारको नाम बार्सिलोनाको चीरप्रतिद्वन्द्वी रियल मड्रिडसँग पनि जोडिएको छ ।